Vono Ankitsirano, Fanolanana ary Fisamborana Faobe, Mbola Fiainana Andavanandron’ireo Borondey · Global Voices teny Malagasy
Vono Ankitsirano, Fanolanana ary Fisamborana Faobe, Mbola Fiainana Andavanandron'ireo Borondey
Voadika ny 07 Avrily 2017 15:03 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, Português, Italiano, Français
Mpikomy mitam-piadiana ao Borondy, sary avy amin'ny NewsDay
Mbola nodinihan'ny Filankevi-Pilaminan'ny Firenena mikambana indray, tamin'ity taona ity , ireo tranga mahatsiravina nandrotika an'i Borondy efa ho taona 2 izao. Fandinihana nataony niainga avy tamin'ny fandalinana ny tatitra vao avy natolotr'i Adama Dieng, Mpanolotsaina manokan'ny Firenena Mikambana momba ny fisorohana ny vonomoka, tatitra miresaka ny toedraharahan'io firenena ao Afrika Afovoany io, izay manasongadina ny mety hisian'ny “herisetra faobe”.
Lahatsoratra iray mitondra ny lohateny hoe Fihitsohan'ny toedraharah'i Borondy ao amin'ny Filankevi-Pilaminana nivoaka tao amin'ny tranonkalam-baovao Bujumbura News,bilaogy iraisan'ireo borondey monina any ivelan'ny fireneny ary mpisera amin'ny aterineto sy manely vaovao miresaka manokana an'i Borondy, no mampahatsiahy ny niandohan'ny olana sy ny fiantraikany amin'ny vahoaka.
Io olana io dia teraka avy amin'ny fanapahankevitry ny filoha Pierre Nkurunziza hikatsaka fotoam-pitondrana fanintelony tamin'ny Aprily 2015, norasin'ny avy amin'ny fanoherana sy ampahany avy amin'ny azy ihany ho fihetsika tsy ara-dalàna izany. Ary dia efa niteraka famoizana aina marobe, 500 (ONU) hatramin'ny 2000 hoy ireo fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana, anjatony maro ireo olona tsy hita nanjavonana, ary 400.000 eo ho eo no voatery nanao sesitany ny tenany.
Mandà io tatitra io ny governemanta, amin'ny filazàna azy io ho resaka politika sy tsikombakomba iraisampirenena ikendrena ny hampidarabohana azy. Kanefa, marobe ireo fijoroana ho vavolombelona mavesatra manamafy ireny zavadoza iampangàna azy ireny.
Raha nanao fanamarihana momba ny toerana misy ny zon'olombelona eto amin'izao tontolo izao tamin'ny 8 Martsa 2017, dia nilaza i Zeid Ra'ad Al Hussein, kaomisera ambony ao amin'ny Firenena Mikambana misahana ny resaka zon'olombelona, fa velom-panahiana tanteraka mahita hoe :
nanjavona ao an-tsaina ireo habaka demaokratika. Mitohy ny fitaterana fisianà herisetra ataon'ny tafika, izay ahitàna fanjavonana, trangam-pampijaliana sy fisambontsamborana fahatany. Natsahatr'i Borondy ny fiarahany miasa amin'ny biraon'ny Kaomisaria ambonin'ny Firenena Mikambana misahana ny zon'olombelona (HCDH), hoy ilay Kaonisera Ambony nalahelo.
Toy ny manamafy ireny tahotra ireny, ny Talata 4 Aprily 2017 dia nanamarika ny tranonkala rpa.bi, an'ny Radio publique africaine, izay tohanan'ny CORDAID, ny COOPERATION SUISSE, CARE INTERNATIONA, OPEN SOCIETY FOUNDATION, ny PNU ary ny ONU- FEMMES, fa nisy Imbonerakure avy amin'ny CNDD-FDD, fikambanan'ireo tanora ao amin'ny antoko eo amin'ny fitondrana, ao amin'ny faritry ny havoanan'i Mukungu sy Muguruka, nivorivory nilanja kalaza sy kibay :
Taorian'io fivorivoriana io, nizotra nitandahatra nankany amin'ny àlan'i Rukambasi ry zareo. Araka ny voalazan'ireo vavolombelona, teo anelanelan'ny enimpolo hatramin'ny zato teo no isany. “Lazain-dry zareo fa handeha hihaza ireo mpihoko any anaty àlan'i Rukambasi ry zareo”, hoy ny loharanonay.
Ireo loharano ireo hany koa no mbola milaza fa misy Imbonerakure hafa avy amin'ny antoko eo amin'ny fitondrana tonga avy any amin'ny faritra hafa, toa efa mivonona ny hanatevina laharana sy hanolo-tànana azy ireo. Ny Alatsinainy maraina, fiarabe roa feno miaramila no nijanona tao Mukungu ary nidina nandeha an-tongotra nankany Rikambasi ireo miaramila.
Manahy ny hisian'ny fifandonana ao anatin'ny àlan'ì Rukambasi ireo mponina ao an-toerana. Ny fiarovana ny ain'izy ireo no tena mampanahy ny vahoaka, raha toa kosa ireo mpitantan-draharaha, manomboka amin'ny Governoran'i Makamba, ka manao fivoriana mampiahiahy ny maro any amin'io faritra io. Toy izany ireo fivoriana roa natao ny 31 Martsa sy ny 3 Aprily 2017 teo, nitarihan'i Gad Niyukuri, governoran'i Makamba, tany amin'ny faritra Kazirabageni.
Efa nampangaina ireo Imbonerakure noho ireo fanararaotana nataon-dry zareo tamin'ny anaran'ny foko, nanaovany lasibatra ireo sivily mpiasan'ny ONG Human Rights Watch izay nampahafantatra hoe:
Feno mpikambana avy amin'ny Imbonerakure sy polisy, indraindray mitondra basy, kibay na antsy, manolana vehivavy, izay noheverin-dry zareo ho mpanohitra fanjakàna ireo lehilahy ao anatin'ny fianakaviany. Amin'ny tranga sasany, rahonan'ireo Imbonerakure na anaovany herisetra ireo lehilahy ao anatin'ny fianakaviana mialoha ny hanolanany ny vehivavy. Mazàna no mitohy mahazo fandrahonana ireny vehivavy ireny aorian'ny fanolanana nanjo azy.
Naolan'ireo Imbonerakure sy ny polisy izay vehivavy nanandrana nandositra ho any Tanzania, toy ny hanakiviana azy reo handao an'i Borondy.
Nametraka sakana teny an'arabe sy toerana fisavàna tany amin'ny faritany sasantsasany ireo Imbonerakure. Maka vola amin'ireo mpandalo ary mila vaniny amin'izy ireny, sy , na dia tsy manana fahefana kely akory aza ho entina manao izany, nisambotra olona ahiahiany ho mifandray amin'ny mpanohitra. Nitety varavarana ihany koa ry zareo maka vola amin'ireo mponina.
Ny Martsa 2016, taorian'ny nandefasany iraka iraisana, nanambara ny Federasiona Iraisampirenena misahana ny Zon'Olombelona (FIDH) sy ilay fikambanana rahavaviny ao Borondy fa nahita heloka bevava azo entina eo anatrehan'ny Fitsarana Heloka Bevava Iraisampirenena (CPI) ry zareo ary dia nanaitra an-dRamatoa Fatou Bensouda,
Ny 14 Aprily, rehefa tafaverina avy namita iraka fanadihadiana natao tamin'ny Martsa 2016 tao Borondy, nilaza ny FIDH sy ny ITEKA, fikambanana ao Borondi mikambana ao aminy, fa “ny toetra manokan'ireo heloka bevava tsikaritry ny iraky ny FIDH dia mampiseho heloka azo tsaraina manoloana ny CPI” ary niantso an-dramatoa mpampanoa lalàna « mba handray fanapahankevitra [ny] hanokatra ny farahakeliny amin'ny fandinihana savaranonando ny toedraharaha ao Borondy, izay Firenena mpikambana ao amin'ny CPI ».Ireo fikambananay dia mandray an-tànan-droa ny fanapahankevitra tahaka izany ary manantena fa, manoloana ny maha-zavadoza ireo heloka bevava notanterahana sy ny tsy fisian'ny fitsarana ao amin'ilay firenana, dia hanokatra haingana fanadihadiana momba ireo heloka bevava henjana be ao Borondy ny CPI.
Tao anaty lahatsoratra iray nivoaka tao amin'ny tranonkala sentinelle-droit-international.fr, nampahafantatra i Gabin EYENGA hoe efa nanambara i Rtoa Fatou Bensouda tamin'ny 25 Aprily 2016, tao anaty Fanambaràna iray, fa nanapaka hevitra ny biraony hanomboka ny fandinihana savaranonando ny zavamisy ao Borondy nanomboka ny Aprily 2015 ka hatramin'izao». Ary nohazavainy ny fizotrany:
Ny fandinihana savaranonando dia fandinihana izay tatitra azo eo am-pelatànana momba ny toedraharaha iray mba hahafahana mamaritra amin'ny alàlan'ny fahafantarana ny zavamisy raha toa ka misy fototra azo raisìna ho entina manokatra fandihadiana mifanaraka amin'ireo masontsivana napetraky ny Satan'i Roma. Io fandinihana io « tsy midika velively ho efa fanadihadiana, » Misava làlana azy izy ary mamolavola azy. Ity fanapahankevitry ny Fampanoavana ao amin'ny CPI ity dia taorian'ny toedraharaha momba ny maha-olona ao Borondy izay notsarain'i M. Ivan Simonovic, Sekretera jeneralin'ny Firenena Mikambana misahana ny Zon'Olombelona, ho « tena mampiahihahy raha resaka zon'olombelona » .
… Aorian'ny fandinihana savaranonando ny toedraharaha ao Borondy dia handrafitra fehinteny ny Fampanoavana, na tatitra iray hahitàna izay ho famaritana voalohany araka ny lalàna ireo heloka bevava lazaina fa andraikitry ny CPI no mitsara azy. Hiainga avy amin'ny zavamisy sy ny tatitra nomena ny Biraony io fandinihana io. Ho azony atao ihany koa, araka ny toko faha-15, andininy faha 2 amin'ny Satan'i Roma,
Fa eo anelanelan'izany, nanapaka hevitra hiala tamin'ny CPI i Borondy. Fihetsika nampalahelo an'ilay borondey bilaogera, Jean Marie Ntahimpera, tao anatin'ny lahatsoratra iray nivoaka tao amin'ny tranonkala iraisana yaga-burundi.com iza ivondronan'ireo bilaogera mifofotra manova ny toetsaina.
Izaho dia isan'ireo izay mihevitra fa fanapahankevitra diso ny fialàna tamin'ny CPI, izay vao mainka manamasina ny tsimatimanota sitrahan'ireo matanjaka mpanao heloka bevava izay tsy sahin'ny fitsaràna eto an-toerana tsaraina akory.
Fa ny tena mampalahelo ahy indrindra, dia io fanapahankevitra io notefena hifanaraka amin'ny filàna manokana. Hiteny izao ny fitondràna ao Bujumbura : “Tsy maintsy atao izay rehetra azo atao mba hiarovantsika tena”. Marina izany, sarotra ny toerana misy azy ireo. Toherin'ny any ivelany, ampangaina ho manao fanitsakitsahana faobe ny zon'olombelona, voabahan'ireo sazy iraisampirenena, no sady tsy mamim-bahoaka. Raha toa mijoro hanao fanadihadiana ny CPI na mandefa didy fampisamborana, dia efa mariky ny fahamelohana izay, na dia, ambony latabatra ihany aza, mila hajaina ny fiarovana ny olona tsy mbola voampanga. Ny famelàna ny CPI hanadihady dia hampahalemy ny fankatoavan'ny vahoaka ny governemanta.
Saingy adinon'ireo mpitondra antsika ny tena zavadehibe : ny hoavy. Lazain'ny anatra iray tena malaza fa ny fifidianana hoavy no saintsain'ny olona iray mpanao politika, fa ny taranaka hoavy kosa no heverin'ny olona iray mpitarika. Ho ahy, raha nihevitra ny taranaka hoavy ny fitondrana ao Bujumbura, tsy niala tamin'ny CPI izy. Azo heverina ny hoe afaka 5 na 10 taona, tsy ho eo intsony ireo eo amin'ny fitondrana ankehitriny, somary an-terisetra be angamba (tsy izay no faniriako). Amin'izay fotoana izay, ireo izay manapaka hevitra amin'izao fotoana izao fa hiala amin'ny CPI, ny zanak'izy ireo, angamba, no ho voalohany hikiakiaka ny hiverenan'io fitsarana io hiaro azy ireo. Saingy ho tara loatra.
Misy lahatsary iray mivezivezy ao amin'ny aterineto mampiseho ireo tanora Imbonerakure miventy antony iray anasàny ireo mpikambana ao aminy hanolana ireo vehivavy tutsi. Ny 4 Aprily 2017, i Spageon Ngabo, tao amin'ny bilaogy iraisana yaga-burundi.com, dia nandefa antso hampitsaharana ny fihoarampefy, tamin'ny fanondroana fanamby hafa ho atrehana :
Rehefa notondroin'ny ONU ho milisin'ny antoko eo amin'ny fitondrana ianareo, nolavinareo izany, tamin'ny fidradradradràna ho ren-tany ho ren-danitra fa ianareo dia « mpandàla ny demaokrasia sy mangetaheta fandriampahalemana, mifamatotra mafy amin'ny Repoblika ary atosiky ny fanahin'ny fandeferana, niharan-doza tamin'ny fampielezankevitra fanilikilihana sy fanaratsiana »(nldr) . Momba an'io, amin'ny foko manontolo no tiako hinoana fa tsy ho endrika ivelany narafidrafitra fotsiny iny lahatsary iny, satria na ho inona na ho inona, rahalahiko ianareo eo anatrehan'izao tontolo izao, ary ny sary omenareo dia hisy fiantraikany amin'ireo tanora eto Borondy. Raha te-hitazona anareo amin'ny teny aho, dia mety hanontany anareo ny antony iezahanareo manome rariny an'ireo voanjo imperialista mitondra antsika ho toy ny olondia tsy voafolaka.
Ry imbonerakure malala, toeram-panorenana goavana i Borondy, ary tsy lany fanamby maro mety hanainga fanahy antsika hamorona hiram-pitolomana maro: ity firenena kelintsika ity dia manana vahoaka vinaina ho eo amin'ny 11,1 tapitrisa izay tanora ny 70% , mipetraka aminà velarantany 27 834 km². Isika dia manana Harinkarena Faobe 315 $ isam-batanolona, taham-pitomboana – 2,4 % tamin'ny 2015 ary tsy fananana asa izay tsy mitsahatra ny mitombo. Ao anatin'ny firenena isan'izay fatra-panao kolikoly eto ambonin'ny tany isika, firenena faharoa mijaly indrindra eto an-tany raha ny tatitra avy amin'ny Firenena Mikambana, ary fahatelo mahantra indrindra koa tamin'ny 2016.
Kanefa, tao anaty fanambaràna iray, nilaza ny CNDD-FDD fa mifanohitra amin'ny idealiny io fomba fanao io.
Efa tamin'ny 1994, araka ny tranonkala iraisana bujumburanewsblog.wordpress.com, ny Tatitry ny Firenena Mikambana momba ny Olana ao Borondy tamin'ny 1993, nataon'ny Kaomity iray mahaleotena mpanao fanadihadiana dia tonga taminà fehinkevitra hoe nisy ireo “fanaovana vonomoka” nandritry ny krizy iray hafa.
Na eo aza io zavadoza io, hoy i Egide Nikiza maneho hevitra ao amin'ny tranonkala iwacu-burundi.org, izay manamafy fa tarika iray ahitàna olona dimampolo any ho any maneho ny fahasamihafàna ao Burondy, dia nanamafy ny Filoha Nkurunziza, tamin'ny Desambra lasa teo, nandritry ny velakevitra ho an'ny daholobe, “fa mety tsy ho afaka handà ny tsy hikatsaka fotoam-pitondrana fanintelony ny tenany raha toa ka mangataka izany aminy ny vahoaka.” Naneho ny ahiahiny i Antonio Guterres, sekretera jeneralin'ny Firenena Mikambana.
4 andro izayAngola
15 Novambra 2016Azia Atsimo
Manao Sary ireo Herisetra Niainany Teny Amin'ireo Arabe Pakistaney i Shehzil Malik